Home Wararka Gudaha Xildhibaan Sadaam Maxamuud Cabdi oo kulan casho sharaf ah la qaatay bulshada...
Xildhibaan Sadaam Maxamuud Cabdi oo kulan casho sharaf ah la qaatay bulshada uu ku matalo kursiga HOP158.
Xildhibaan Sadaam Maxamuud Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka DFS ayaa kulan casho sharaf ah la qaatay, Cuqaasha, Culimada, Waxgaradka iyo dhalinyarada uu matalo kursiga HOP158.
Ujeedada kulan ayaa ahayd sidii xildhibaanku ugu xog-warami lahaa, iyaguna ula wadaagi lahaayeen baahiyaha jira, waxyaabaha ay doonayaan In uu ku matalo, qodobada mudnaanta u leh dadka deegaanka iyo sidii loo xaqiijin lahaa matalaada kursiga.
Ugu horayn Xildhibaan Sadaam Maxamuud Cabdi ayaa sheegay in uu horay u balan-qaaday in markii doorashadu dhamaato, uu soo laaban-doono, si uu codkooda iyo baahidooda u qaado si xukuumada cusubi ay wax uga qabato.
Qaar ka mid ah Odayaasha iyo dhalinyarada uu xildhibaanku matalo ayaa u mahad-naqay, waxay ku amaaneen in sharafkiida iyo kan kursigaba uu dhawray, oo maanta uu ka hufan yahay in lagu dhaliilo in doorashadii uu dhaqaale ka sameeyay.
Previous articleDegdeg:Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo Dil toogasha ku fulisay Ninkii Maalin kahor Gabar Ganacasta ah ku Dilay Magaalada Beydhabo.
Next articleMadaxwaynaha Hassan Sheikh ayaa booqday wasarada Difaaca Soomaaliya .